by Beverly Little on Aprily 15, 2021
Jereo eto Ireo fitaovana natao hitondra Targeted Traffic Ho an'ny Fandaharana Marketing Affiliate
Salama! Beverly Little no anarako ary tongasoa ato amin'ny bilaogiko, "Fifamoivoizana hifandraisana". Ity dia nasongadina feno WordPress Ny bilaogy dia anisan'ny fitaovana lehibe ho azonao rehefa miditra Manangana Biz Online. Ankafizo ny lahatsoratr'ity tranonkala ity, atolotra anao ny fitaovana fifamoivoizana kendrena ary ny programa fanaovana varotra Affiliate. Mipetraka any Etazonia aho ary nahazo diplaoma avy amin'ny Northwestern University (Go Cats).
Tiako ny mahita fifamoivoizana kendrena…
Ny safidiko voalohany momba ny asa dia ny Human Resources izay tena tiako. Anjarako ny mikendry ny olona mety hanana asa manokana. Araka izany, hitako ny tetezamita voajanahary mankany amin'ny marketing amin'ny Internet, izay mitaky ny fampifangaroana ny fivezivezena kendrena marina izay hampiasa vola amin'ny programa marketing marina. Aorian'izay dia tiako ny mahita fifamoivoizana kendrena hiova fo. Amin'izao fotoana izao dia efa misotro ronono aho. Izaho izao dia Amway Tompon'antoka mahaleo tena miasa manokana amin'ny fikarakarana hoditra lafo vidy, sakafo, rivotra ary rafitra fanadiovana rano.
Tiako ny fandaharana momba ny varotra Affiliate…
Nandritra ny fitetezana onja dia nahita ihany koa aho fitiavana ny programa marketing marketing izay miteraka fidiram-bola sisa tavela. Ny tanjoko dia ny manangana fanjakana ara-barotra amin'ny Internet, mifantoka amin'ny fitaovana fifamoivoizana kendrena zava-kanto sy ireo programa marketing marketing.
Ary tiako ny miala voly!
Tiako ny mamaky, karazana mozika isan-karazany ary mijery sarimihetsika kilasika taloha. tiako mahandro sakafo, fiantsenana lamaody ary fitetezana surf koa!
Mirary tontolo andro mahafinaritra ary Ankafizo ny tsara indrindra amin'ny fiainana